Diarim-Piainana ao Amponja Etiopiana: Fijoroana Vavolombelon’i Befeqadu Hailu · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2014 22:07 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Français, Português, русский, Deutsch, čeština , English
Nosoratan'ilay bilaogera sady mpiaro ny zon'olombelona Befeqadu Hailu tamin'ny faran'ny volana Aogositra 2014 ity fijoroana vavolombelona ity. Mpikambana mpanorina ny Zone9 blogging collective sy mpikambana ao amin'ny Global Voices izy, izay nosamborina sy nogadraina tamin'ny 25 Aprily 2014, miaraka amin'ireo namany hafa mpikambana ao amin'ny Zone9 sy mpanao gazety mpiara-miasa aminy telo. Tamin'ny 17 Jolay 2014, voampanga tamin'ny alalan'ny fehezan-dalàna momba ny heloka bevava ao amin'ny firenena sy ny Fanambarana Fampihorohorona tamin'ny 2009 ireo sivy nogadraina. Notanisain'i Befeqadu tao amin'ny lahatsorany ny anaran'ireo namany nogadraina, ka anisan'izany i Abel, Mahlet, sy Natnael. Mpikambana ao amin'ny Zone9 avokoa izy rehetra ireo.
Voalohany amin'ny fizarana roa avy amin'ny lahatsoratra nofintinina tamin'ny fijoroana vavolombelon'i Befeqadu ity. Nadikan'i Endalk Chala tamin'ny teny anglisy avy amin'ny teny Aamharika ary nahitsin'i Ellery Roberts Biddle mba hazava kokoa ny vontoaty. Azo jerena ao amin'ny endrika PDF eto ny fijoroana vavolombelona feno.
«Araka izany, inona no heverinao fa heloka vitanao?”
Nanao izany fanontaniana izany tamiko ny mpanao famorotorana ahy rehefa avy nanery ahy hitantara ny asako amin'ny maha-mpikatroka sy bilaogera tia mivoatra ahy. Fotoana fohy taorian'ny famotorana, rehefa nampiarahan'ireo mpaka an-keriny tamiko ireo bilaogera namako, nahita izahay fa mitovy ny fanontaniana napetraka taminay rehetra:
Befeqadu Hailu. Sary nahazoan-dalana.
Mampiahiahy ilay fanontaniana. Mampiseho ny maha-tsy manantsiny anay, amin'ny fandavanay izay heloka hiahiahian'ireo mpaka an-keriny anay. Eny, nofotoran'izy ireo mafy izahay, saingy mifarana amin'ny fanontaniana mitovy hatrany ny fanadihadiana tsirairay. Tsy natao hanaporofoana na hitsipahana ny heloka hanenjehana anay ny famotorana. Fa natao fotsiny mba hampiaikena anay ho meloka.
Taorian'ny roa taona nanoratana sy niasana ho fanentanana ny olom-pirenena hiditra amin'ny adihevitra politika, nosamborina izahay ary natao famotorana. Nomena anay ny tsiny fa nahavita heloka bevava izahay, izay voalaza fa noho ny maha-mpikambana sy ny “fanekena hanao iraka” hoan'ny [antoko politika mpanohitra] Ginbot7/May 15 sy ny OLF.
Ny dingana manaraka dia ny «fombafomba fitsarana tsy maintsy arahina” sy ny fitsarana anay, saingy mihevitra aho fa mbola misy fanontaniana tokony hovaliana. Ahoana no nahatongavanay teto? Tahaka ny ahoana ny famotorana anay? Tena mpikambana marina ao amin'ny Ginbot7/May15 ve izahay? Raha tsia, nahoana no nosamborin'izy ireo izahay? Ho havotsotr'izy ireo tsy ho ela ve izahay atsy ho atsy?
Tsy maninona izay fetra misy eto amin'ity firenena ity. Hiatrika fandrahonana sy fanagadrana ny olona izay manoratra momba ny zava-misy ara-politika ao Ethiopia raha mbola velon'aina.
Mino izahay fa ny tsirairay izay efa niaina ity zava-misy ity, ary matahotra ny voka-dratsin'ny fanehoana hevitra, dia miaina ao ivelan'ny fonja – dia ilay firenena mihitsy. Izany no nahatonga anay hiantso ny bilaoginay hoe Zone9. 
Vao roa herinandro monja no nitsanganan'ny Zone9 raha tsy navelan'ny governemanta idirana intsony ny bilaoginay iombonana ao Etiopia tamin'ny taona 2012. Na dia eo aza ny fanakatonana, mbola nanohy nanoratra izahay, saingy fantatray fa izahay ihany no mizaka ny fanakatonana ny bilaoginay. Fantatray fa mety hiafara amin'ny fisamborana hanagadrana anay izany.
Andro maro sy herinandro mialoha ny nanagadrana anay tamin'ny volana Aprily 2014, nandrahona anay ireo mpiambina ny governemanta fa antomotra ny fisamborana anay, saingy mbola mihovotrovotra amin'ny zava-mahazo anay izahay. Nosamborina sy nogadraina ireo mpikambana ao an-toerana enina ao amin'ny bilaogy iombonana sy ireo namanay mpanao gazety telo. Ankoatra ny iray tamin'ireo mpanao gazety (Asmamaw Hailegiorgis ao amin'ny gazety Addis Guday), nosamborina ny Zoma 25 Aprily teo amin'ny 11 alina izahay ary nalaina tany an-tranonay tsirairay avy. Nosamborina i Asmamaw ny ampitso maraina. Tamin'ny fotoana nisamborana anay sy nitondrana anay tany amin'ny fonja, efa lany andro, araka ny lalàna ny Etiopiana ny datin'ny “antoka” manome alalana ny fisamborana anay. Nanomboka teo ny fanohintohinana tsy ara-dalàna tamin'ny zonay. Tsy niandry ela, nanjary lasibatry ny fanitsakitsahana ny lalàna Etiopiana ataon'ireo manampahefana izahay.
Mampangorintsika izay rehetra mahafantatra ny tantarany (fonja) na dia ny eritreritra hiditra ao amin'ny fonjaben'i Maekelawi malaza ratsy. Saingy nanampy ahy tsy hangovitra ny fanantenako madio sy ny finoako fa ho lasa fahatsiarovana hohadinoina ny fampijaliana sy ny habibiana atao ao raha niditra tao amin'ilay toerana lehibe aho. Mihevitra aho fa mitovy amin'izany ihany koa ny namako. Ankoatra izany, tsy misy zavatra tokony atahoranay, satria sady tsy mpiasa mpitsikilo izahay no tsy mpikambana ao amin'ny tafika. Mpanoratra fotsiny ihany izahay.
Raha vao tonga tao Maekelawi aho, nampahafantatra ahy ireo gadra fa apetraka amin'iray amin'ireo vaki-paritra malaza ao amin'ny fonja, antsoina hoe “Siberia” aho. Tsy ampy herinandro, nahatsiaro toy ny miaina ao anatin'ny tantara navoakan'ny tatitry ny Mpanaramaso Ny Zon'Olombelona tamin'ny 2013 mitondra ny lohateny hoe «Mitady fiaikena izy ireo” aho. 
Enina amin'ireo bilaogera nogadraina ao Addis Abeba. Sary nahazoan-dalana.
Fantaro bebe kokoa ny raharaha iampangana ireo Blaogeran'ny Zone9 ao amin'ny Trial Tracker Blog.
 Antoko mpanohitra miorina any Etazonia ny Ginbot7 sy ny Oromo Liberation Front (OLF) = Mandam-Panafahana ny Oromo. Samy ampangain'ny governemanta Ethiopiana ho samy manao fampihorohoroana avokoa izy roa ireo.
 “Ny fonjaben'i Kality ao Addis Ababa dia mizara faritra valo, ary ny faritra farany — Zone Eight — na faritra fahavalo dia natokana ho an'ny mpanao gazety, mpikatroky ny zon'olombelona ary ny mpisintaka. Raha niaraka izahay dia nanapa-kevitra hanangana blaogy nakana fomba fitenenana avy amin'ny fonja izay iainan'ny Ethiopiana rehetra: io no Zone Nine [Faritra (faha-) Sivy.” hita ao amin'ny “Six Members of Blogging Collective Arrested in Ethiopia,” nosoratan'i Endalk Chala.
 “They Want a Confession” [Mila fiaiken-keloka ry zareo] raki-kevitra miresaka ny finitsakitsahana ny zon'olombelona, paikadim-pamotorana tsy manara-dalàna, ary ny toeram-pamonjàna mampahonena ao Addis Ababa antsoina hoe Maekelawi, noravahana avy amin'ny antsafa nifanaovana amin'ireo gadran'i Maekelawi teo aloha sy ireo fianakaviany. Tsy vitsy amin'ireo voafonjan'i Maekelawi ireo ny politisiana mpanohitra, mpanoratra gazety, mpikarakara fihetsiketseha-panoherana, ary ireo lazaina fa mpanohana ny fiokoana ara-poko. Ato ny tatitra manontolo.